Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Zvita 30, 2021
Zvita 31, 2021
Vanhu makumi maviri nevanomwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zviuru zviviri nezana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Vanhu vakawanda vanotarisira zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti musarudzo dzehutungamiri hwematunhu muZanu PF, idzo dzinonzi dzaiva nemhirizhonga mumamwe matunhu pamwe nekupomerana kubiridzira mavhoti.
Kanzuru yeChitungwiza inopa vese vakavaka zvisiri pamutemo panzvimbo yemabhizimisi yeTown Centre kuti vaputse zvivakwa zvavo mukati memaawa makumi mana nemasere ari kutevera ichiti kana vakasaita izvi, kanzuru ichaputsa zvivakwa izvi yega.
Mamwe mapato anopikisa ari kupomera hurumemde mhosva yekushandisa mitemo yeCovid-19 kutyora kodzero dzevanopikisa nekuvasunga kana vakaungana nekurambawo kuita sarudzo dzema by-election asi Zanu-PF ichibvumidzwa kuita sarudzo dzayo yakatochengetedzwa nemapurisa pasina kutevedzerwa mitemo yeCovid-19 kunzvimbo dzakawanda.
Studio7 inotarisa zvakadzama mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra 2021
Muchirongwa cheWomens RoundTable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munguva ino yekupeta gore ra 2021.
Masangano Akazvimirira Anoramba Mashoko aSachigaro veZEC, Amai Chigumba.
Zvinzvimbo zvePDP Zvokwikwidzwawo Zvisineyi Kuti Matare Akati Nhengo Idzi Hadzina Kudzingwa Zviri paMutemo
Muzvare Thokozani Khupe Vanoti Ndivo Vava Mutungamiri weMDC-T